In kabadan 10 xildhibaan oo Kenyan ah oo suuragal ay tahay in ay lumiyaan kuraastooda – Kalfadhi
Sagaal Xildhibaan, laba senator iyo xildhibaan hore oo Kenyan ah ayaa ay suuragl tahay in ay lumiyaan kuraastooda, arrimo la xiriira haysashada laba dhalasho, ka dib markii qof ololeeye ah uu guddiga la dagaallanka Musuqa ku qanciyay in ay baaraan sida ay daacad ugu yihiin dalalka kale.
Ololeeye Okiya Omtatah, ayaa warqad ku taariikheysan 1-dda October u diray Guddiga ladagaallanka Musuqmaasuqa ee Kenya ee (EACC), taas oo uu kaga dalbanayay in baaritaanka la sameeyo.
Mr Okiya, ayaa sidoo kale sheegay in labada Senator ay heystaan dhalashada dalka Mareykanka.
Hoggaamiyaha Aqlabiyadda Baarlamaanka Kenya, Aden Barre Ducaale ayaa beeniyay in uu haysto dhalashada dal kale, ka dib markii arrintaa lagu eedeeyay isaga iyo xildhibaanno kale oo qaar kood ay Soomaali yihiin.
“Dastuurka waxaa uu mamnuucayaa in xildhibaannada ay heystaan laba jinsiyadood, taas oo ukeeni karta in ay dhax-dhaxdaad noqdaan”, guddoomiyaha EACC Eliud Wabukhala ayaa sidaasi yiri.